स्पेनमा हुने शिरिजको लागि नेपाली टिमले तयारी थाल्ने, ब्याटिङ कायपलट गर्ने कोच कहिले आउछन् ? | TajaKhabarTV
स्पेनमा हुने शिरिजको लागि नेपाली टिमले तयारी थाल्ने, ब्याटिङ कायपलट गर्ने कोच कहिले आउछन् ?
२०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार १८:३६ June 10, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
एजेन्सी । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सील, आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टु अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्डविचको श्रृखलाका लागि नेपाली टोलीले अर्को साताबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ । स्पेनमा हुने उत्त श्रृखलाका लागि नेपाली टोलीले अर्को साताबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ ।
यसका लागि नेपाली क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोर नेपाल पुग्ने बताइएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि श्रीलंका फर्किएका प्रशिक्षक ह्वाटमोर मंगलबार काठमाडौं आइपुग्ने बित्तिकै प्रशिक्षण सुरु हुने क्यानले बताएको छ ।
नेपाली टोलीको प्रशिक्षण शिविरमा पहिलो चरणमा २१ वा २२ खेलाडीलाई राखिने र त्यसबाट अन्तिममा १५ खेलाडीलाई त्रिकोणात्मक खेलका लागि छनोट गरिने छ । नेपालले सुरुवाती चरणमा नेपालमा नै प्रशिक्षण गरेपनि त्यसपछि बैदेशिक भूमीमा करिव दुई साता प्रशिक्षण गर्ने क्यानले तयारी गरेको छ ।
प्रतियोगिताको मिती र तालिका एकिन हुन बाँकी छ । लिग टू मा नेपालले अहिलेसम्म चार खेल खेल्दा दुई जित र दुई हार ब्यहोरेको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपालले अमेरीकाविरुद्ध दुई जित निकाल्दा ओमानसँग दुई हार ब्यहोरेको थियो ।
नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले अस्ट्रेलियाविरूद्धकाे खेलमा नतिजा भन्दा पनि प्रदर्शन राम्रो बनाउनेमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। विश्वकप छनोटको दोस्रो चरणको खेल खेल्न नेपाली टोली कुवेतमा छ। इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर कुवेत पुगेको नेपाली टोलीले चाइनिज ताइपेइलाई २-० ले हराएको थियो भने जाेर्डनसँग ३-० ले पराजित भएको थियो। भोलि (शुक्रवार) हुने खेलमा नेपालले समूह बी कै बलियो टोली अस्ट्रेलियासँग खेल्दै छ।